Wednesday 2nd June 2021 09:47:18 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
Somalia waxaa haysta dhibaatooyin badan. Waxaana ka midda amni xumo, dawlad jilicsan iyo khaat. Dhibaatada khaatku waa tan ugu weyn. Li’na labada ummada jiritaan keeda salka u ah buu khaatku cadow ku yahay oo ah maalka iyo maskaxda dadka.
A-Somalida waxaa kaabiga u taagan milaygii ay isaga dhicin lahayd gumeystaha cagaaran ee ka xun toban jeer kay horey isaga xoreeyeen. (Markale kacaan xoreenta Somali; (Somali second freedom ﬁghting).
B –Tobanka maamul ee Somali ee kala ah: mamulka Waqooyi Bari Kenya , Soomaali Galbeed Ethopia ,Jabuuti , Somaliland, Puntland, Galmudug, Hir-shabeele, Banaadir, Koonfur Galbee iyo Midka Jubaland mid walba awood buu u leeyahay inuu khaatka gobolka ka joojiyo, isagoo habka maamul kiisu u dhisan yahay umaraya. Ethiopia iyo Kenya kuma qasbin khatka somalida ee somalidu iyadaa dalbatay oo suuqa Weyn u furtay, iyadaana iska xirikarta.
C –Degmo kasta oo ka tirsan gobol ama state waxay qabtaa awood ay khatka degmada kaga joojinkarto. Fuleygu wuxuu ka baqaa wax dhibaya oo uu ka adagyahay, laakiin waa fuley.
Waxaa Maqaalkaan Qoray oo ay u gaar tahay